नेपाली जनताका लागि खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ : प्रम ओली « Today Khabar
प्रकाशित १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०९:३९
न्यूयोर्क : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, नाना र छानायुक्त प्रजातन्त्र आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
प्रश्न ः यस पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
प्रश्न ः महासभा महाधिवेशन बाहिर भेटघाटमा कस्ता अभिव्यक्ति आए ?
प्रश्न ः शान्ति सेनामा खर्च कटौतीको कुरा नि ?
प्रश्न ः भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएका वार्ताका विषय ?
प्रश्न ः स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कुरा ?
– हाल नेपाली नियोगमा कार्यवाहक प्रमुख सक्षम र अनुभवी हुनुहन्छ । धेरै हतार गर्नुपर्दैन । यस्तो कुरा कर्मकाण्ड होइन, काम चलाउन निकै अनुभवी समूह छ, हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छैन । धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले विलम्ब भएको हो, अब छिट्टै राजदूतको चाँजोपाँजोको काम हुन्छ । (तस्वीर छ)